umgca wokuveliswa kweentlanzi zokudada,Ukulungisa iipellets ezintandathu zeentlanzi
1.Olu luhlu lokulungiswa kokutya kweentlanzi lusetyenziswa ngokubanzi njengamanzi kunye nokutya kwezilwanyana zasekhaya okufana nentlanzi yegolide, intlanzi eshushu, intlanzi yekati, iimbadada, inja, ikati kunye nokunye.
2.Umgca wokuvelisa ukutya kwepelethi yenkqubo yentlanzi yinkqubo epheleleyo yokuveliswa kwepelethi yokutya.
3.Lo mgca wokutya weentlanzi uyilelwe ukwenza iipellets zorhwebo zombona, umbona, ingca, amazimba, iprotein, iinyibiliki njalo njalo, kunye neepellets zokugqibela ezinemilo eyahlukeneyo, incasa ekhethekileyo, izondlo ezityebileyo kunye nokukhanya okufanelekileyo.
Umgca wokuveliswa kweentlanzi ezityayo zentambo yinkqubo epheleleyo yemveliso yeepellet. Lo mgca wokutya weentlanzi uyilelwe ukwenza iipellets zorhwebo zombona, umbona, ingca, amazimba, iprotein, iinyibiliki njalo njalo, kunye neepellets zokugqibela ezinemilo eyahlukeneyo, incasa ekhethekileyo, izondlo ezityebileyo kunye nokukhanya okufanelekileyo, kwaye le migca yokutya yokuloba ngentlanzi isetyenziswa ngokubanzi njengamanzi kunye nokutya kwezilwanyana zasekhaya njengegolide, intlanzi eshushu, intlanzi yekati, iimbadada, inja, ikati njl njl.. Ulawulo oluzenzekelayo oluzenzekelayo, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu, Umgca wokuveliswa kweentlanzi zethu ezidadayo lolona khetho lulungileyo kwiimayile eziphakathi nendawo ezinkulu zokutya kunye neefama zokufuya. Imigca yemveliso egqibeleleyo ye-pellet enobuchule obahlukeneyo bayakhona ukuhlangabezana neemfuno ezithile zabathengi.
Lo mgca wokuveliswa kokutya okuneenqanawa usanda kuphuhliswa ukuze kuhlangatyezwane nemfuno yokuveliswa ngamandla kweepellets zokutya kwezilwanyana. Ngamagama amaninzi lo mgca wemveliso unokuvelisa ukutya okufumaneka kwiintlanzi, ukuntywila kwintlanzi, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, ukutya kwemfuyo, njl. Iimveliso zinokuba neemilo ezahlukileyo, incasa ekhethekileyo, izakha-mzimba ezityebileyo kunye nokuthungwa okuhle ukuze uhlangane nendlela eyahlukileyo yokutya kwizilwanyana. Ulawulo lwe-automation oluzenzekelayo kunye nokusebenza ngempumelelo kwemveliso, Umgca wokuveliswa kweentlanzi zethu ezidadayo lolona khetho lulungileyo kwiimayile eziphakathi nendawo ezinkulu zokutya kunye neefama zokufuya. Umtya wethu wokutya weentlanzi unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeepellets zeentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi kubandakanya iipellets zeHalibut, Iicatfish zepellets, CatCarp pellet, Iipellethi zerout, Iipellets ze-Hemp, I-CSL pellets,njl.
Inkqubo yokuSebenza yoMda weFish yeLungelo lokuFudusa
Procedure Inkqubo yetekhnoloji:
Izinto zokuQala → ukuxubana → ukugqithisela → ukukhukhumeza okungaphezulu → ukuhambisa → ukomisa → ukupholisa → ukuvavanya → ukutshiza ioyile → isinongo → ukupakisha
◇ Ukulungiswa kwezixhobo
Umxube → iyunithi yokudlulisela
Uncedo lokuLunga kweMveliso yokuTya ngeNtlanzi
Ipharamitha yetekhnoloji, njengezinto eziluhlaza, iqondo lobushushu, kunye nokufuma, kwesi sityalo sisebenza ngokuvelisa iintlanzi sinokuhlengahlengiswa. Ukutya okuntywila kwiintlanzi okuveliswa sesi sityalo kunembonakalo entle, incasa ekhethekileyo kunye nerayisi-yesondlo, zilungele iintlanzi ezahlukeneyo kunye nezilwanyana ezifuywayo.
Umtya wokutya weentlanzi usetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokutya kwezilwanyana, njengezinja, amakati, intlanzi, iimpungutye, iintaka kunye nezinye izilwanyana zasekhaya.
◇ le ntlanzi yokutya okuhambisa amanzi ngentambo isebenzisa ubuchule bokuphinda kabini. Inkqubo yokuvelisa ukutya ngepellet, Ukusuka kwizinto ezingafunekiyo ezityhoboza kwiimveliso ezigqityiweyo, mayigqitywe ngexesha elinye.
Yonke imishini yokondla iintlanzi kwesi sityalo isebenza ngokuzinzileyo kunye nobuchwepheshe obuphambili. Inokwanelisa iimfuno zemveliso yabathengi abohlukeneyo kwimarike yangoku.